UNFC ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခိုက်တော့မှာလား…? ~ Myanmar Online News
UNFC ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခိုက်တော့မှာလား…?
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC)ကြောင့် တိုင်းပြည်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် များ အခက်အခဲများ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်း ထိုကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကြာ မှာ လှုပ်ခတ်လာခဲ့ပါသည်။ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံးသည် တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိရမည်ဟုဆိုထားသည့်အတိုင်း ကမ်းလှမ်းမှုများ လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်ချို့သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များက လက်မခံဘဲ ယခင် အစိုးရလက်ထက်က သဘောတူခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။
ယနေ့အချိန်ထိ သက်သေသာဓကအဖြစ် ကချင်ပြည်နယ်က KIO/KIA အဖွဲ့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ တိုက်ပွဲ များ ရပ်တန့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အထိ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်ရပ်လက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးပေ။ RCSS/SSA၊ SSPP/SSA၊ KNU စသည့် အင်အားကြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပင် အစိုးရနှင့်အပစ်ရပ်သဘောတူ နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့(MPC)နှင့် တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆွေးနွေး ခွင့်ရလာသောအခါ လိုတာထက်ပိုပြီး တောင်းဆိုမှုများ ရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များဘက်က NCCT အဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ဆွေးနွေးလာ သည်။ NCCT မတိုင်မီ UNFC ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ NCCT က ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ များ ဆောင်ရွက်သည် မှန် သော်လည်း UNFC က ဘာလုပ်သလဲ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါသည်။ ယနေ့အချိန်ထိ အစိုးရ၊ တပ်မတော် တို့က အတည်ပြုထားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အသစ်ပြန်ရေးဆွဲဖို့၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ထူထောင်ရေး အသံပေးနေတာကလွဲရင် လက်တွေ့ဘာမှ လုပ်မပြနိုင်သေးပါဘူး။ ရှင်းရှင်းပြော ရရင် လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ကို အကြပ်တွေ့အောင် နောက်ကွယ်မှာ ဆင်ကြံကြံနေရုံကလွဲပြီး လက်တွေ့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်သောအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
UNFC ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး မပါဝင်ပါ။ UWSA`၀´၊ NDAA (မိုင်းလား)၊ RCSS/SSA လို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ မပါဝင်သလို KNU ကလည်း နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထား ပြီးသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် UNFC လို နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းအင်အား နဲ့ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လုပ် ဖို့ မတောင်းဆိုဘူး။ စစ်တိုင်းတွေခွဲပြီး အလှည့်ကျတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်ရေး စိတ်ကူးမယဉ်ကြ ပါဘူး။ ရရှိပြီးသား ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်မြဲဖို့အတွက် လိုက်လျောညီထွေနေ လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
UNFC သာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဌာနချုပ်ဖွင့်ပြီး အရည် အချင်းရှိရှိ ရပ်တည်ကြရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတော့ တိုင်းတစ်ပါးက ပေးစာကမ်းစာစားပြီး ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး၊ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးကို တစာစာအော်နေကတော့ လူတိုင်းလုပ်တတ် သော အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ်သိပြီး မအပ်စပ်သော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အလှည့်ကျ လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးကလည်း ရှက်တတ်လျှင် လဲသေဖို့ ကောင်းပါသည်။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်တောခို၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အဖွဲ့အစည်းထူထောင်၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပေးထားတဲ့ ရာထူးတွေနဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့မတဲ့လား၊ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးကို အုပ်ချုပ်ချင်သတဲ့လား၊
UNFC မှာ ကြီးစိုးနေတာက KIA/KIO ပါ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင် မလုပ်တဲ့KIO လို အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင် များ UNFC ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ယူထားမှတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်စိတ်ဝင်စားပါတော့မလဲ။ KNU လို ပြတ်ပြတ် သားသား အပစ်ရပ်ပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုပ်ဖို့ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်တွေ စိတ်ကူးမရှိသလို သူတို့ရာထူး၊ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်နေ တာ ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ပြောရရင် MPC နဲ့ NCCT တို့ ဆွေးနွေးပွဲအဖြေ အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြည့်ကြာနေ သည်ဖြစ်စေ UNFC လိုအဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ရရှိရေးကိုပဲ လက်စွဲထား တောင်းဆိုနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကို ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ဆွဲ ဖို့ကြံစည်နေတဲ့ UNFC ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခိုက်တော့မှာလားဆိုတာ ပိတ်ကားပေါ်က အဖြေကို စောင့်ကြည့်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။